Ingovhurwa: Brand New Costa Rica Convention Center
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Costa Rica Kupwanya Nhau » Ingovhurwa: Brand New Costa Rica Convention Center
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Costa Rica Kupwanya Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kufamba Wire Nhau
The Costa Rica Musangano Wekokorodzano (CRCC) ichangobva kuvhura mikova yayo - ramangwana uye rinochengetedza 15,600-mita-mita nzvimbo inongova 10km kubva kuguta guru reSan José. Nyika yekutanga-yakavakirwa musangano wekonisheni inovavarira kuisa Costa Rica semutambi akakomba mumusika wezviitiko wepasi rese.
Iine mari inokwana madhora makumi matatu nemashanu emadhora, iyo Convention Center itsva inogona kugara vanopfuura mamirioni mazana matanhatu nemazana mana nemazana mana emazana emamiriyoni emamiriyoni ekuratidzira. Iyo CRCC inoratidzira horo huru (inopatsanurwa kuita zvikamu zvitatu); makamuri matanhatu emusangano; dzimba nhanhatu dzemisangano; mafuru mahombe uye pre-chiitiko nzvimbo; nzvimbo yebhizinesi uye imba yekutandarira yeVIP.
Zvakare nekungowanikwa kunze kweSan José, CRCC iri zvakare 8km kure kubva kuJuan Santamaría International Airport - iyo inopa yakananga nendege kubva kuUK - uye ine makamuri e4,500 emahotera mukati meiyo 7km nharaunda.
Kuchengetedza hakusi kwekutanga chete asiwo mararamiro ehupenyu muCosta Rica, uye iyo nyowani yeConferensi Center inosangana nezvose zvinodiwa mundima iyi. Iyo CRCC inoratidzira bioclimatic, zvakatipoteredza uye inogadzirika dhizaini uye mapurani - kusanganisira hectare remadziro epaneru maseru, nzvimbo dzekurapa mvura, simba-rinoshanda mhepo kutonhodza, yemukati neyekunze mwenje mwenje uye mwenje nzvimbo dzepakati nemiti yemuno. Miti nemadhamu zvichavewo 'zvakasikwa' munzvimbo yakatenderedza Convention Center kugadzira nzvimbo yakaita sepaki.
VaMauricio Ventura, Gurukota rezvekushanya kuCosta Rica, vakati "Musangano weConferensi mutsva ndizvo zvataida kuti zvitibatsire kuisa nyika pamepu yemusika wezvematongerwo enyika musangano, uko kubudirira kunotsamira pahunhu hwezvivakwa nemabasa anopiwa. ”
Kuvhurwa kweConferensi Center kunotevera zano re Costa Rica Tourism Board (ICT) yekuvandudza chirongwa chemakwikwi kukwikwidza zvine mutsindo mumabhizimusi emisangano yepasi rose Mumakore matatu apfuura, ICT yakawedzera zvakanyanya huvepo hwayo mumabhizimusi ekuratidzira uye kuratidzira, yakawedzera basa reCosta Rica Convention Bureau uye yakagadzira iyo 'Ambassadors Chirongwa' kutora masangano nemasangano anobatanidzwa mukuunza zviitiko munyika.
Sekureva kwaVaVentura, zano iri rakaisa Costa Rica mu53rd nzvimbo pakati penyika mazana maviri mu200 International Congress uye Convention Association (ICCA) chinzvimbo chenyika.
Inenge makumi masere makumi masere emakongiresi achaitirwa muCosta Rica kusvika 80.
Costa Rica inopa vashanyi kuwanda kwemhuka dzakasiyana dzemusango, nharaunda nemamiriro ekunze zvichireva kuenda kune ino nyika yeCentral America chero chinhu kunze kwekumhanya kweguyo. Yakapoteredzwa neGungwa reCaribbean nePacific Ocean, nyika inodada inovhara 5% yezvinhu zvipenyu zvinozivikanwa pasi rese.